Indlela… (2) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluncane ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina, kodwa Ngihlala Ngizwa kungcono ukuba nesikhumbuzo noma isifinyezo esincane sabafowethu nodadewethu. Ngisebenzisa leli thuba nje ukuze ngisho okuncane okusenhliziyweni Yami; Angikhulumi ngalutho olunye olungaphandle kwalo msebenzi. Ngiyethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bangaqonda umoya Wami, futhi ngokuzithoba Ngicela ukuthi bonke abafunde amazwi Ami baqonde futhi baxolele isakhiwo Sami sobuncane, engidlule kukho empilweni Yami akwalene ngokweqiniso, futhi Angikwazi ukungakhophozi phambi kukaNkulunkulu. Nokho, ngihlala ngizizwela ukuthi lezi yizizathu ezingachemile kuphela. Ngamafuphi, noma kungaba njani, abekho abantu, izimo, noma izinto ezingathiya ukuhlanganyela kwethu ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bayakwazi ukusebenza kanzima phambi kukaNkulunkulu ngokubambisana Nami. Ngingathanda ukuhlinzeka ngalo mthandazo olandelayo: "O Nkulunkulu! Ngicela ube nomusa kithi ukuze Mina nabafowethu nodadewethu silwisane nokubuswa yilokho esikholwa yikho ngokuhlanganyela, sikholelwe Kuwe kuze kube sekufeni, futhi singaphinde sibuyele kuyo!" La mazwi awukuzinikela engizibekele phambi kukaNkulunkulu, kodwa kungashiwo futhi ukuthi kuyisiqubulo Sami njengomuntu wenyama osetshenziswa uNkulunkulu. Ngabelane ngalokhu ngokuhlanganyela nabafowethu nodadewethu abaseduze Kwami kaningana, futhi lokhu ngikunike labo abaseduze Kwami njengomyalezo. Angazi ukuthi abantu bacabangani ngakho, kodwa noma kungaba njani, Ngikholwa ukuthi abanayo imizamo eqonde kokuthile kuphela, kodwa phezu kwalokho, baqukethe ingxenye yenzululwazi engachemile. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthi abanye abantu banemibono ethile, futhi ungathatha lamagama njengesiqubulo sakho, ubone ukuthi umdlandla wakho wokuthanda uNkulunkulu ungakanani. Abanye abantu bazoqhamuka nemibono ethile uma befunda la magama, futhi bacabange ukuthi: "Kungenzeka kanjani ukuthi ukusho into yansukuzonke, ejwayelekile kunike abantu umdlandla omkhulu wokuthanda uNkulunkulu kuze kube sekufeni? Futhi akuhlangene nhlobo nesihlobo salokho esixoxa ngakho. 'Indlela.'" Ngiyazisa ukuthi la magama akajabulisi kangako, kodwa bengihlala Ngicabanga ukuthi angaholela abantu endleleni eyiyo, futhi abenze badlule ezilingweni ezinhlobonhlobo endleleni yabo yokukholelwa kuNkulunkulu ngaphandle kokukhathala noma kokuhlehlela emuva. Yingakho ngihlala ngithatha lokhu njengesiqubulo Sami, futhi Ngethemba ukuthi abantu bangacabangisisa ngalokhu. Nokho, inhloso Yami akusikho ukuphoqa bonke abantu ukuthi bamukele imibono Yami—lokhu kuyisiphakamiso nje. Noma abanye abantu bengacabangani Ngami, Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuqonda okunhlobonhlobo okuqhubeka ngaphakathi komunye nomunye wethu. UNkulunkulu uyaqhubeka nokusebenza komunye nomunye wethu, futhi umsebenzi Wakhe uwenza ngokuzimisela. Lokhu kwenziwa ukuthi sonke sazalwa ezweni likadrako omkhulu obomvu—yilesi isizathu sokuthi asebenze ngale ndlela kithi. Labo abazalwa ezweni likadrako omkhulu obomvu banenhlanhla yokuthola lolu hlobo lomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Njengomunye wabo, Ngizizwela uthando olukhulu, ukuhlonipheka, kanye nobuhle bukaNkulunkulu. Lo Nkulunkulu esinakekela. Lo mbuso wabasebenzi abasemuva, abashaya ngonyawo lwakudala, abasebenza amasimini, abakholela kwezenkolelo-ze, futhi abaphucwe amathuba uthola lolu hlobo lomsebenzi kuNkulunkulu Kulokhu, kusobala ukuthi thina, leli qoqo labantu enkathini yokugcina, sibusiwe kakhulu. Ngikholwa ukuthi bonke abafowethu nodadewethu omehlo abo akamoya avulekile ukuze babone lo msebenzi bakhala izinyembezi zenjabulo, futhi ngaleso sikhathi, bekunganjani ukhombise uNkulunkulu lokhu ngokudansa ngenjabulo. Ngeke uphe uNkulunkulu iculo enhliziyweni yakho? Ngaleso sikhathi ngeke uvezele uNkulunkulu isinqumo sakho futhi wenze olunye uhlelo phambi Kwakhe? Ngicabanga ukutho konke lokhu kuyizinto okumele zenziwe abantu abakholelwa kuNkulunkulu ngokufanele. Njengabantu, Ngikholwa ukuthi sisonke kumele kube khona esikuvezayo phambi kukaNkulunkulu. Lokhu yinto okumele yenziwe umuntu onemizwa. Ngokubheka isimo sabo bonke abantu phakathi kwethu kanye nendawo esizalelwe kuyo, kuveza ukuthi uNkulunkulu ufake ukuzithoba okungakanani kithi sonke ukuze akwazi ukuba phakathi kwethu. Yize sinalo ulwazi oluthile ngoNkulunkulu ngaphakathi kwethu, ngokususela kulokho esikwaziyo, uNkulunkulu mukhulu kakhulu, uphakeme kakhulu, futhi uhloniphekile, kwanele ukwazi ukuthi ukuhlupheka Kwakhe kube bukhulu kangakanani phakathi kwesintu uma kuqhathaniswa. Kodwa lokhu kusayinto engasho lutho olutheni uma ishiwo, futhi abantu bayithatha njengamanzwi nezimfundiso. Lokhu kwenziwa ukuthi labo abaphakathi kwethu bandikindiki kakhulu futhi bayiziwula. Ngingakwazi ukwandisa indlela yokuchaza lolu daba kubo bonke abafowethu nodadewethu abazokwamukela ukuze imimoya yethu ikwazi ukunyakaziwa uMoya kaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu Angavula amehlo ethu kamoya ukuze sibone inani uNkulunkulu alikhokhile, umzamo Awenzile, kanye namandla Awasebenzise kithi awachithe ngathi.
Izinkulungwane zeminyaka eminingana zombuso kadrako omkhulu obomvu beziwububi yonke le nkathi kuze kube manje, futhi ngoba uqhubekile nokumelana noNkulunkulu, uNkulunkulu uliqalekisile leli lizwe futhi waliphatha ngentukuthelo, futhi emuva kwalokho wakhipha isijeziso Sakhe. Leli lizwe eliqalekiswe uNkulunkulu libhekane nokucwaswa ngokwebala, futhi lisasesimweni sokuba semuva. Izwe esazalelwa kulo liyindawo yokuhlanganyela kwenqwaba yemimoya engcolile, futhi ngenxa yalokho idlangile yonke indawo ifuna ukubusa leli lizwe. Lokhu kuholele ekungcolisweni kwesithunzi salabo abazalelwe lapha. Imikhuba yabantu, izinqubo, nemibono kanye namasu abo asemuva futhi angawakudala, ngakho banayo yonke inhlobo yemibono ngoNkulunkulu abasakwazile kuze kube manje ukuyichiliza. Uma kungabalulwa nje, baziphatha ngenye indlela phambi kukaNkulunkulu futhi baziphathe ngenye ema bengasekho phambi Kwakhe, bephambanisa ukuvikela uSathane ngokusebenzela uNkulunkulu. Lokhu kukhombisa ukuba semuva kakhulu. UNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu ezweni laseChina futhi ukhulume amazwi Akhe amaningi, kodwa abantu namanje basandikindiki futhi abehlukile. Basenza imisebenzi yabo ngendlela ababeyenza ngayo ngaphambilini futhi abawaqondi nhlobo amazwi kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ememezela ukuthi lalingekho ikusasa nethemba, ibandla elaliphila lapho linokushisa likhipha umkhovu etsheni lavele langena ebusika obubandayo. Ubuqiniso ngabantu bambuleka emini ka bha futhi ukuzethemba kwabo kwangaphambilini, uthando, namandla konke kwaphela nya. Futhi manje, akekho umuntu osebuyele emandleni okuphila futhi. Bathi ngamazwi abo bayamuthanda uNkulunkulu, futhi yize bengalingi nhlobo ukukhalaza ezinhliziyweni zabo, noma bengenzani alukho lolo thando. Kumayelana nani lokhu? Ngicabanga ukuthi abafowethu nodadewethu bazolivuma leli phuzu. Sengathi uNkulunkulu angasikhanyisela, ukuze sikwazi sonke ukwazi ubuhle Bakhe, sithande uNkulunkulu wethu ekujuleni kwezinhliziyo zethu, futhi sonke siveze uthando esithanda ngalo uNkulunkulu ezimweni ezahlukene; sengathi uNkulunkulu angasipha izinhliziyo ezingaguquki zokumuthanda ngokweqiniso—yilokho engikufisayo. Sengikushilo lokhu, Ngiyabazwela kancane abafowethu nodadewethu abaphila kuleli lizwe lokungcola, ngakho udrako omkhulu obomvu sengimuzonda kakhulu. Uvimba uthando lwethu lukaNkulunkulu futhi usilinga ngokulangazelela kwethu lokho esingafinyelela kukho kusasa. Usilinga ukuze sibe nemibono emibi, simale uNkulunkulu. Udrako omkhulu obomvu obelokhu esikhohlisa, esonakalisa, futhi esidlakaza kuze kube yimanje, kangangoba asikwazi ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu ngezinhliziyo zethu. Sinayo intshisekelo ezinhliziyweni zethu kodwa ngaphandle kwethu uqobo, asinamandla. Sonke siyizisulu zawo. Ngenxa yalesi sizathu, Ngiwuzonda ngokusuka ekujuleni Kwami futhi Ngijahe kabi ukuthi ubulawe nya. Nokho, uma Ngicabanga futhi, lokhu ngeke kusize futhi kungalethela uNkulunkulu inkinga enkulu, ngakho ngibuyela kulawa mazwi—Ngibhekisa inhliziyo Yami ekuqhubeni intando Yakhe—ukuthanda uNkulunkulu. Le yindlela engiyilandelayo—yindlela Mina, omunye wezidalwa Zakhe, okumele ngihambe ngayo. Yindlela okumele ngichithe ngayo impilo Yami. Lawa amagama aphuma enhliziyweni Yami, futhi Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bazophinde bakhuthazeke kancane emuva kokufuna la mazwi ukuze inhliziyo Yami ibe nokuthula. Ngoba umgomo Wami ukwenza intando kaNkulunkulu futhi ngalokho ngiphile impilo ngokugcwele nangokubuhlakani, Kulokhu, ngizokwazi ukufa ngaphandle kokuzisola, Nginenhliziyo egcwele ukubonga nentokomalo. Ungathanda ukwenza lokho? Ingabe uwuntu othathe leso sinqumo?
Ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukusebenza kulabo ababizwa ngokuthi "Indoda Egulayo yaseMpumalanga Asia" ngamandla Akhe amakhulu. Kungukuthobeka Kwakhe nokufihlakala. Ngaphandle kwamazwi Akhe aqinile noma ukusola okubhekiswe kithi, kumele sidumise Yena ngokusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu ngenxa yokuthobeka Kwakhe, futhi sithande Yena kuze kuphele lokhu. Abantu abebeboshwe uSathane izinkulungwane zeminyaka baqhubekile nokuphila ngaphansi kwethonya lakhe futhi abalilahlanga. Baqhubekile nokudwanguza kanzima futhi bezabalaza. Ngaphambilini babeshisa impepho, futhi bekhothamela futhi bevikela uSathane, futhi bebambelele kakhulu emndenini kanye nezibopho eziqhelelene nenkolo kanjalo nobudlelwane nabanye abantu. Babengahluleka ukuhlukana nakho. Kulolu hlobo lomphakathi lapho kuncintiswana ngaphandle kozwelo, lapho noma ubani engaba nempilo ebalulekile? Okukhunjulwa abantu impilo yokuhlupheka, futhi ngenhlanhla, uNkulunkulu ubasindisile laba bantu abamsulwa, wabeka izimpilo zethu ngaphansi kokunakekelwa Nguye nokuvikela Nguye ukuze izimpilo zethu zibe ngezinentokozo futhi zingasagcwala izinkathazo. Siqhubekile nokuphila ngaphansi komusa Wakhe kuze kube manje. Ingabe akusiso isibusiso sikaNkulunkulu? Umuntu angakwazi kanjani ukuba nesibindi sokufuna izinto ezingaka kuNkulunkulu? Ingabe usinike okuncane kangako? Namanje anikaneliseki? Ngicabanga ukuthi sekufike isikhathi sokuthi sibuyisele uthando lukaNkulunkulu. Yize sibhekene nokudelelwa, nokugcwanekwa, nokuhlushwa okungekuncane ngoba silandela indlela yokukholelwa kuNkulunkulu, Ngikholwa ukuthi lokhu kuyinto ebalulekile. Yinto yenkazimulo, hhayi yamahloni, futhi noma kungaba njani, izibusiso esizithokozelayo azizincane neze. Ezikhathini eziningi zokudumala, amazwi kaNkulunkulu alethe intokomalo, futhi ngaphambi kokuba size sazi, usizi luphenduke intokozo. Ezikhathini eziningi zokudinga, uNkulunkulu ulethe izibusiso futhi sihlinzekelwe ngamazwi Akhe. Ezikhathini eziningi zokugula, amazwi kaNkulunkulu alethe ukuphila—sikhululiwe engozini, futhi sakhishwa engozini saphepha. Sewuthokozele izinto eziningi ezinjengalezi ngaphandle kokuzinaka. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi awusakhumbuli?